Yaa Qeerroo ilmaan Oromoo,
Seenaa finciloota addunyaa keessatti dhufanii dabran irraa qabxiilee fardii ta'an lama barachuu dandeenya.
(1) Dargaggoonni leenjii fi muuxxannoo hedduu hin qabnne, ha ta’u malee, fedhii fi hamilee jabaa qaban fincila ummata isaanii geggessanii injifannoon gahuu akka danda’an; (Young people without much training and experience but with passion for the struggle can lead their people’s struggle to success).
(2) Harka caalmaan (mostly) fincilli tokko kan guddatee, injifatee, qabsoo ka’eef bakkaan ga’u, yeroo deggersa ummata qabsaa’uufii horatu fi yeroo mootummaa irratti qabsaa’u akka mootummaa alagaa humnaan isaan qabateetti (occupier) dhiheessee irratti qabsaa’ee ummata isaas qabsoofsisu ta'uu. (Having the support of the civilian population in which they operate and characterizing the regime they oppose as a foreign occupier are the two most important strategies for success).
Waanan kana jedheefan qaba. Qeerroo keenyaafin yaada fi gorsa qaba.
“Dhaamsa Arifachiisaa Barattoota Oromoo Qorumsa Naannoo fi Biyyoolessaa Bara 2016 Fudhachuuf Jiran Maraaf “ jedhu kan Caamsaa 22. 2016 “Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO) irraa kenname!!” aregeen ergaa kana dabarsuuf dirqame.
Dhamsichi, harki caalu, hedduu gaarii fi kan sabboonotota Oromoo hunda gammachiisu fi onnachiisu. Ha ta’u malee, gaaffilee dhaamsi kun mootummaa habashaa humnaan Oromiyaa qabatee jiruuf dhiheessu tokko-tokko kan wal-faallessan fi kan QBOf hin tolle waan ta’aniif salphaatti bira taramuu hin qaban. “Oromiyaan bulchiinsa alagaa fi waraanaa jalaa bahuu qabdi!” jechuun erga mootummaan habashaa kun mootummaa alagaa fi kan humnaan Oromo qabate jiru (occupier) ta’uu ibsee booda, gaaffilee mootummaa koloneeffataa tokkotti dhihaachuu hin qabnne dhiheessa.
1. “Gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo deebiuu qaba!” jedhu. Eenyu irraa deebii argachuu qabaa? Mootummaa humnaan lafa fi ummata keenya qabatee jiru irraa? Kun, gaaffii mootummaa koloneeffataatti dhihaachuu hin qabnne; deebiinillee irraa argamuu danda’a yaada jedhun ummata keenya afanfaajjesuun hin barbaachisu. Kan ummatin keenya dhagahuu qabu abbaan biyyuumaa qabsoo fi lolachuun malee akka hin argamnne.
2. Gaaffii “Mootummaan ceumsaa hundeeffamuu qaba!” jedhu. Gaaffiin kun, tokkoffaa, mootummaa fi sirna koloneeffataa du’ee baduun isaa dhihaatetti umurii dheeressuuf kan gargaaru malee kan QBO fayyadu miti. Oromiyaan biyya humnaan qabame (koloneeffatame – akkuma Zimbabew, Algeria, fi …). Oromoo bilisummaa fi Walabummaaf falmachuu malee “mootummaa Cehumsaa”f falmuun QBO boodatti deebisa. Ummata keenyas ni afanfaajjessa; Tokkummaas nu dhorkata.
3. Gaaffii “Kanneen Ummata Orommoorratti waraana labsanii fi fakkaattotni isaanii seeratti dhiyaachuu qabu!” jedhu. Seera isa kam baantuu? Seera eenyutti? Seera ummatin Oromoo mootumma koloneeffataa kana wajjin walii-galee tumatee ittiin bulaa jirutu jiraa? Osuma seerri akkasii jiraatee iyyuu, mootumma koloneeffataa habashaa amma Oromiyaa irra jiru keessatti ol aantummaan seeraa akka bakka hin qabnne hin beekttanii?
Yaa Qeerroo ilamaan Oromoo,
Deggersa ummata qobsoofttaniifii akka qabddan shakkiin hin jiru. Ofitti amantaan ummata keenya bilisoomsuu fi biyya keenya Oromiyaa walaboomsuuf socho'aa. Ummatin keenya akka qaroo ija isaatti isin ilaala; isinis dhaggeeffata! Kanaaf, dhaamsi keessan hamma danda’ametti qulqulluu fi kan wal hin faallessine yoo ta’e ummata keenya tokkoomsuu fi irroomsuu danda’a. Kanaaf, itti haa yaadamu!
Kabaja Oromummaa wajjin,